ADO in Window Application | our notes for our youngers
Comments (6)	September 16, 2009
ADO.NET in C# (part 3)
Filed under: ADO in Window Application — Tags: .NET, ADO.NET, C#, DataBase, programming — sevenlamp @ 10:21 AM ကဲ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်တို့ မနေ့က program လေးကိုပဲ ပိုပြီးလွယ်တဲ့ နည်းလေးသုံးပြီး ပြန်ရေးလိုက်ရအောင်ဗျာ။ dataset ကို အရင်မဆောက်ပဲ datagrid ကနေတဆင့် ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ(၁)မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း အဆင့်ဆင့်သွားလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ dataset ကြိုမဆောက်ထားတဲ့အတွက် choose data source ထဲမှာ ဘာမှ တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကဲ Add Project Data Source လင့်လေးကို click လိုက်ပါ။ ပုံ(၂)
ဒါဆိုရင် Data Source အမျိုးအစားရွေးခိုင်းတဲ့ window လေးပေါ်လာပါ့မယ်။ ကျွန်တော်က databaseထဲကနေ ယူချင်တာဖြစ်လို့ Database ကိုရွေးပြီး Next ပါမယ်။
ဒါဆိုရင် connection ရွေးခိုင်းတဲ့ နေရာကိုရောက်ပါပြီ။ အရင်က ချိတ်ဖူးတဲ့ connection တွေရှိနေရင် ပုံ(၃)မှာ ပြထားသလို combobox လေးထဲကနေရွေးပေးလိုက်ပါ။ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဟိုနေ့က ပြောခဲ့သလို New Connection လုပ်ရမှာပါ။ Next ထပ်နှိပ်ပါဦး၊ ဒါဆို connection ကိုသိမ်းမလား မေးလိမ့်မယ်။ သိမ်းမယ်ပြောပြီး Next ထပ်နှိပ်ပါ။
Database object ရွေးခိုင်းတဲ့ နေရာရောက်ရင် Tables အောက်က Category Table ကိုရွေးရပါမယ်။ DataSet name နေရာမှာ CategoryDataSet လို့ ပြောင်းချင်ရင် ပြောင်းလို့ ရပါတယ်။ ဒီတိုင်းထားလည်း ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ကဲ Finished လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ datagrid နဲ့ database ချိတ်ဆက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးပါပြီ။ dataSet ကိုလည်း ဆောက်ပေးသွားမှာပါ။ form load event မှာလည်း data fill လုပ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့က data update လုပ်ဖို့ code ၂ ကြောင်းပဲ ရေးပေးစရာ လိုအပ်ပါတော့တယ်။ ကဲ… ဘယ်လိုလဲ… ပုံ(၅)
private void CategoryList_Load(object sender, EventArgs e)
LeaveaComment	September 15, 2009
ADO.NET in C# (part 2)
Filed under: ADO in Window Application — Tags: .NET, ADO.NET, C#, DataBase, programming — sevenlamp @ 9:42 AM ကဲ မနေ့က ကျွန်တော်တို့ categoryDataSet ဆောက်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ အခုကျွန်တော်တို့ datagrid မှာ ပြဖို့ လုပ်ရအောင်။ အရင်ဆုံး window form တစ်ခုယူလိုက်ပါ၊ နာမည်ကိုတော့ CategoryList လို့ ပေးလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီ form ထဲကို ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း label တစ်ခု၊ button တစ်ခုနဲ့ datagrid တစ်ခုထည့်လိုက်ပါဦး။ control တွေမှာ ပြင်ရမယ့် property setting ကိုလည်း ပြထားပါတယ်။
Datagrid ကို click နှိပ်လိုက်ရင် ညာဖက်အပေါ်ဒေါင့်မှာ arrow icon လေးတစ်ခုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် datasource ရွေးဖို့ combobox လေးကိုတွေ့မှာပါ။ အဲ့ဒီ combobox လေးကို နှိပ်ပြီး ဒီ form လေးမှာ ရှိနေတဲ့ datasource တွေကိုရွေးလို့ရပါတယ်။ အခုကျွန်တော်တို့က datasource မထည့်ရသေးလို့ ဘာမှ တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ datasource တစ်ခု create လုပ်ဖို့နည်းလမ်း ၂ခုရှိပါတယ်။ နည်းလမ်း (၁) က အောက်က ပုံ (၂) မှာ ပြထားသလို combobox ထဲမှာ အဆင့်ဆင့်သွားပြီး ကျွန်တော်တို့ ဆောက်ထားတဲ့ CategoryDataSet ထဲက category table လေးကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ပုံ (၃) မှာ ပြထားသလို categoryBindingSource object, categoryDataSet object နဲ့ categoryTableAdapter တို့ကို ဆောက်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ datagrid မှာလည်း category table ထဲက column တွေ ပေါ်လာတာ တွေ့ရမှာပါ။ ဒါဆိုရင် datagrid နဲ့ dataset ချိတ်တဲ့ အပိုင်းပြီးသွားပါပြီ။ အခု ဒီ program လေးကို run လိုက်ရင် data တွေပေါ်လာပြီလား။ မပေါ်ဘူးနော်… ဘယ်ပေါ်မလဲ category table ထဲမှာ data မှ မရှိတာကိုး ပုံ (၂)
ကဲ အခု ကျွန်တော်တို့ dataset နဲ့ ချိတ်ဆက်မှု ပြီးသွားပြီ ဆိုတော့။ data အသွင်းအထုတ်လုပ်လို့ ရပါပြီ။ ဒီလိုလုပ်လို့ ရဖို့အတွက် အရင်ဆုံး ပုံ (၃)မှာ ပြထားသလို datagrid မှာ Enable Adding, Enable Editing နဲ့ Enable Deleting တို့ကို check လုပ်ပေးခဲ့ရပါမယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမှာက program ကို run လိုက်ပြီး category တွေထည့်ရပါမယ်။ ဒီလိုထည့်တဲ့ အခါမှာ categoryID ကို ထည့်ပေးစရာ မလိုပါဘူး။ primary key ဖြစ်တဲ့ categoryID ကို autoincrement လုပ်ထားတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ data ဖြည့်ပေးစရာ မလိုပါဘူး။ save လုပ်ရင် အလိုလိုထည့်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ အခုကျွန်တော်တို့ data ဖြည့်ပြီးလို့ database ထဲကို သိမ်းတော့မယ်ဆိုရင် update button ကိုနှိပ်ပါ့မယ်။ ဒါဆို update button ရဲ့ click event မှာ dataset ထဲက data တွေကို database ထဲသွားသိမ်းဖို့ အတွက် code ရေးပေးရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခု datagrid ထဲမှာ ထည့်နေတဲ့ data တွေက memory ပေါ်က categoryDataSet ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒီ data တွေကို database ထဲရောက်ဖို့အတွက် Adapter ကနေတဆင့် Update function ကိုခေါ်ရမှာပါ။ မခေါ်ခင်အရင်ဆုံး datagrid နဲ့ ချိတ်ထားတဲ့ datasource ကို ပြင်နေတာ ပြီးပါပြီလို့ ပြောပေးရပါမယ်။ ဒီလိုမျိုးပါ…
အခု ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တဲ့ update function က dataset ဆောက်တုန်းက compiler က auto ဆောက်ပေးသွားတဲ့ function ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ (၅) ပုံ (၄) မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော် category ၂ကြောင်းဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ categoryID က -1 နဲ့ -2 ဆိုပြီး temporary assign လုပ်ပေးသွားပါတယ်။ update button ကို နှိပ်ပြီး update လုပ်လိုက်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ ပုံ(၅) အတိုင်း ဖြစ်သွားမှာပါ။ categoryID က database ထဲကအတိုင်း refresh ဖြစ်သွားပါတယ်။ program ကို ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်တဲ့ အခါမှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ form_load event မှာ ရေးထားတဲ့ ဒီ code ကြောင့်ပါ။
ဒီ code ကို ကျွန်တော်တို့ datagrid နဲ့ dataset ထဲက table နဲ့ ချိတ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ auto ရေးပေးသွားတာပါ။ dataset ထဲမှာ ရှိတဲ့ categoryTableAdapter ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ Fill function ကိုသုံးပြီး dataset ထဲက category table ထဲကို data ဖြည့်ပေးပါတယ်။ table ထဲမှာ dataရှိသွားတဲ့ အတွက် table နဲ့ ချိတ်ထားတဲ့ datagridview မှာပါ data တွေ ပေါ်လာတာပါ။ အဲ့ဒီ formload event ထဲက data fill လုပ်တဲ့ code ကို comment ပိတ်ပြီး ပြန် run ရင် data ပေါ်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အိုကေ ဒီလောက်ဆိုရင် object datasource သုံးပြီး datagridview နဲ့ data အသွင်းအထုတ်လုပ်တာ နားလည်ပြီထင်ပါတယ်။
Comments (1)	September 13, 2009
ADO.NET in C# (part 1)
Filed under: ADO in Window Application — Tags: .NET, ADO.NET, C#, dataset, programming — sevenlamp @ 11:15 AM ကျွန်တော်တို့တွေ database ထဲက record တွေကို User Interface မှာ ရှိတဲ့ datagrid လို၊ textbox လို control တွေမှာ ပြဖို့ ပြင်ဖို့ ဘယ်လို ချိတ်ဆက်ရမလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ဆက်ပြီးလေ့လာကြရအောင်။ C# window application မှာ database နဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် နည်းလမ်း ၂ မျိုး သုံးလို့ရပါတယ်။ နံပါတ် ၁ နည်းလမ်းကတော့ data ပြမယ့် UI control နဲ့ data ရှိတဲ့ databaseကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဒီလိုဆောင်ရွက်နိင်ဖို့အတွက် SQL DataSource object ကို သုံးရပါတယ်။ နံပါတ် ၂ နည်းလမ်းကတော့ database table တွေထဲက data တွေကို ကျွန်တော်တို့ program ရဲ့ memory ပေါ်မှာ dataset တွေ အနေနဲ့ သိမ်းထားပြီး၊ အဲ့ဒီ dataset တွေနဲ့ UI controls တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို တဆင့်ခံ ချိတ်ဆက်ဖို့ အတွက်တော့ OBJECT DataSource နဲ့ dataset တို့ကို သုံးရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ dataset တဆင့်ခံပြီး object datasource နဲ့ သုံးရတာကို ပိုပြီးကြိုက်တယ်ဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ data အသွင်းအထုတ် transaction တစ်ခုစီအတွက် database ကို အမြဲသွားနေစရာမလိုဘူး။ dataset table ထဲမှာပဲ လုပ်လို့ရတယ်။ အားလုံးပြီးလို့ စိတ်ကျေနပ်ပြီဆိုမှ database ထဲကို တစ်ကြိမ်ထဲ update လုပ်နိုင်တယ်။ နောက်ပိုပြီးကောင်းတာက quary တွေက dataset တစ်နေရာထဲမှာ စုပြီး ရေးထားတာကြောင့် လိုအပ်လို့ modify လုပ်ချင်တဲ့ အခါမှာ လွယ်ကူတယ်။ sql datasource ကိုသုံးရင် data ပြမယ့်နေရာ ၃ နေရာရှိရင် quary ကို သုံးနေရာလုံးမှာ သုံးခါရေးရမှာဗျ။ ဒါဆို ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်း သုံးနေရာလုံးမှာ လိုက်ပြင်ရလိမ့်မယ်။ ချိတ်ဆက်ပုံ ၂မျိုးလုံးကို ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်၊ ပထမဆုံး database ထဲမှာ table လေးတစ်ခုအရင် သွားဆောက်လိုက်ပါဦး။
DATABASE NAME => mySaleDB
TABLE NAME => Category
PrimaryKey (auto increment)
Default vale – true
အိုကေ.. ရပြီနော်… အခုကျွန်တော်တို့ object datasource နဲ့ သုံးတဲ့ပုံစံကို အရင်စပြီး သုံးပြပါ့မယ်။ ပထမဆုံး window project တစ်ခုဆောက်ပါမယ်။ VS2008 => File => New => Project => Window Form Application. Object datasource ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးလိုအပ်တာက dataset ပါ။ database table ထဲက data တွေကို memory ပေါ်မှာ သိမ်းထားဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ dataset ကိုသုံးရပါမယ်။ အိုကေ project menu အောက်က Add new item menuitem ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို item ရွေးဖို့ window ပေါ်လာမယ်၊ အဲ့ဒီမှာ dataset ဆိုတာကိုရွေး CategoryDataSet လို့ နာမည်ပေးပြီး Add လိုက်ပါ။ ဒါဆို CategoryDataSet.xsd ဆိုတဲ့ dataset တစ်ခုကျွန်တော်တို့ ရပါပြီ။ database နဲ့ ချိတ်ဆက်မယ့် dataset တစ်ခုမှာ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း DataTable နဲ့ TableAdapter ဆိုပြီး အပိုင်း ၂ ပိုင်းပါလေ့ရှိပါတယ်။ DataTable ကတော့ memory ပေါ်မှာ data တွေသိမ်းပေးပြီး၊ Tableadapter ရဲ့တာဝန်ကတော့ အဲ့ဒီ table ထဲကို database ကနေ data အသွင်းအထုတ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် Query statement တွေကျွန်တော်တို့ ဆောက်ပေးရမှာပါ။ ကဲ TableAdapter စဆောက်ရအောင်၊ ToolBox ထဲကနေ tableadapter ကို double click လုပ်ပြီးရွေးလိုက်ပါ။ TableAdapter ဆောက်တဲ့ အခါမှာ ပထမဆုံး database နဲ့ connection ယူရပါတယ်။ လက်ရှိ project ထဲမှာ connection ယူပြီးသားရှိရင် combobox ထဲမှာ ရွေးရပြီး၊ မရှိသေးရင်တော့ new connection လုပ်ရပါမယ်။
New connection wizard မှာ ကျွန်တော်တို့ သုံးချင်တဲ့ database အမျိုးအစားရွေးလို့ရပါတယ်။ Microsoft Access သုံးမလား၊ Microsoft SQL Server ပဲသုံးမှာလား၊ Oracle Database ပဲ ချိတ်ချင်လားရွေးလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Microsoft SQL Server ကိုပဲ ရွေးပြီး continue လိုက်ပါမယ်။
Add Connection wizard က Server Name နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ database ရှိနေတဲ့ computer name ကိုထည့်ပေးရပါမယ်။ ကိုယ့်စက်ကို ချိတ်မယ်ဆိုရင် (.) ထည့်ပေးလည်းရပါတယ်။ ပြီးရင် database login username နဲ့ password ထည့်ပေးရပါမယ်။ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ Window Authentication ကိုရွေးခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးတဆင့်ကတော့ database name combo ထဲမှာ mySaleDB ကိုရွေးပေးပြီး OK လိုက်ပါ။
အခု dataconnection combo လေးမှာ ကျွန်တော်တို့ ရွေးခဲ့တဲ့ connection လေးတွေ့နေရပါပြီ။ အဲ့ဒီ connection မှာ password တခါတည်းထည့်မလား မထည့်ဘူးလား ရွေးလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ တခါတည်းပဲ ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ ပြီးရင် Next လိုက်ပါဦး။
အခုဆောက်ခဲ့တဲ့ connection ကိုသိမ်းထားမလား လာမေးပါတယ်။ သိမ်းထားလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ connection ယူတဲ့ အပိုင်းပြီးပါပြီ။ connection ရသွားပြီးတော့ Query ဆက်ရေးရပါဦးမယ်။ ပထမဦးဆုံး SQL Statement သုံးမလား၊ Store Procedure သုံးမလား ရွေးခိုင်းတာပါ။ SQL Statement ပဲ ရွေးပြီး Next လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် Query ရေးဖို့ နေရာရောက်ပါပြီ။ ကျွန်တော်က Category table ထဲက record အားလုံး ထုတ်ပြဖို့အတွက် “SELECT * FROM Category” လို့ရေးလိုက်ပါတယ်။ query ကို ကိုယ်တိုင်မရေးပဲ design ကိုပဲ ဆောက်ခိုင်းချင်တယ်ဆိုရင် Query Builder button ကိုနှိပ်ပြီး ဆောက်လို့ ရပါတယ်။ ကဲ ဆက်ပြီး Next လိုက်ပါဦး။
နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ query ကို program ထဲမှာ ပြန်ခေါ်ဖို့အတွက် function name ပေးရတာပါ။ function ၂ ခုဆောက်ပေးပါတယ်။ Fill နဲ့ Get ပါ။ dataset စဆောက်တဲ့ ပထမဆုံး query အတွက် နာမည်မပြောင်းပါနဲ့ default အတိုင်း ပဲ ထားပြီး next လိုက်ပါဦး။
နောက်ဆုံးမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CategoryDataSet ကြီးအောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်ပြီးစီးသွားပါပြီ။ compiler ဆောက်ပေးသွားတဲ့ result ကိုကြည့်လိုက်ပါဦး။ ကျွန်တော်တို့က Select query တစ်ခုထဲ ဆောက်ခဲ့ပေမယ့် insert, update, delete အားလုံးကို compiler က auto ဆောက်ပေးသွားပါတယ်။
Finish လိုက်ရင် categoryDataSet ထဲမှာ Category Table လေးရယ်၊ table ထဲမှာ ပါတဲ့ column name တွေရယ်၊ CategoryTableAdapter ရယ်၊ Fill နဲ့ GetDate Function တွေရယ်ကို တွေ့ရမှာပါ။ အိုကေ… နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Dataset တွေ တည်ဆောက်တက်ပါပြီ။ နောက်နေ့မှ datagridview နဲ့ ချိတ်ပါ့မယ်။
Comments (4)	My Current Blog…..